Iintlobo zeentloko zezingane ezinokwakheka kwefestile, iAntumn-iHlabathi 2016-2017, kubafana kunye namantombazana abanesithombe
Inkcenkcesho zabantwana abafake imodeli 2016, iifoto zeenwele zokunyusa ezithe tye, iAntumn-yeBusika 2016-2017
Umntwana omhle onenwele entle yinjongo yemvelo kubaphi na abazali. Ngako oko, umbuzo wokukhetha inwele yomntwana ufanelekile ukusukela kwiinkomfa zakudala-nokuba ingaba yinkwenkwana okanye intombazana. Ngokuqinisekileyo, ndifuna ukuba umntwana ngexesha elifanayo bekunjalo. Ngokukodwa kuba bazali, sithatha iincoko zezinwele zebantwana ezisefesini kakhulu 2016 kunye neefoto kunye neziphakamiso ezimfutshane ngokukhetha kwabo.
Iincoko zeentloko zabantwana kubafana IAntumn-Ubusika 2016-2017 Iinqwelo zezinwele zabantwana zamantombazana I-autumn-yebusika 2016-2017
Izinwele zeenwele zabafana, iAntumn-yeHlabathi 2016-2017
Izicatshulwa zeenwele zeenwele zabafana 2014-2016: ifoto
Ukukhetha i-hairstyle kwi-tomboy yakhe, ukhetho lufanele lunikezwe kwiinqununu ezingamthinteli ekufundeni ihlabathi, ukudlala okanye ukudlala. Ukongezelela, simele siqwalasele ukuba ebuntwaneni, abafana abanalo umnqweno okanye izakhono ezifanelekileyo zokunyamekelwa kweenwele, ngoko kungcono ukuyeka i-styles okanye i-styles yobuciko ngokukodwa ukuya kubuntwa.
Ukukhethwa kuthiwa ngabantwana abanamakhanda amanwele afanelekileyo angama-2016 kumakhwenkwe adibanisa ukulungelelanisa imfuneko yengane kunye nesibheno sangaphandle esinqwenela kubazali bakhe. Ngaloo ndlela, ngo-2016 ezi zilandelayo zezinwele ze-boyish ziza kufakelwa:
"I-Hedgehog" -yona khetho eyona ndlela inokwenzeka kuyo yonke into, efanelekileyo ngokufanelekileyo nangaliphi na ixesha lonyaka. Nangona kunjalo, i-"hedgehog" efanelekileyo imodeli ineemeko ezininzi: isimo esifanelekileyo senhloko kunye nokuhlaziywa rhoqo. Ngaphandle koko, uya kugxininisa kuphela zonke iimpazamo zekhayi kwimeko yokuqala kwaye uya kujongeka engakhange aphuculwe kwisibini;
Iimfashini zeMfashini zeMfashini zabafana 2016: Ifoto
"Umdlalo" - ubude obuncinane bentloko kuyo yonke intloko kwenza ezi zihombo zentsapho zentambo 2016 zikhethwe ngokufanelekileyo kubafana abasebenzayo, ukudibanisa ukunonophelo, ukulungelelana nokuchaneka;
"Ngaphantsi kwebhodeni" - le ntlanzi yeebhokhwe ezide ubude ibukeka ibukeka kakuhle, kodwa ingasetyenziselwa ngendlela yokugubungela ukungaphumeleli kwimilo yeendlebe kunye neengqayi. Kwinguqulelo engaphezulu, ithatha utshintsho oluthambileyo, umgca oqhekekileyo kunye nemitha emininzi;
"Bobryk" - le ndlela yokusika iinwele ifikeleleke kwizinwele ze-boyish zangempela, kunye nakwizinwele zezinwele ze-2016 ngokukhethekileyo, kungekhona nje ngenxa yokulula, kodwa nangendlela ebonakala ngayo. Ingakumbi ngokuthe ngempumelelo, "i-beaver" ibonakala kwinguqu "emanzi" kunye nokusetyenziswa kwejel, engasetyenziselwa njengendlela yokuthabatha umkhosi;
"Kesare" - elifutshane lezinwele ezinokubaluleka ubude obuya kwi-5 cm kunye neengcingo ezincinci eziqhelekileyo phakathi kwezinto zezinwele zabantu kwaye zibhekwa njengezinwele zokugqoka "ngaphandle kweminyaka yobudala", ngenxa yokuba iyaziwa ngokulinganayo phakathi kwimihla yobulili obuqinileyo. Kwinguqu yeklasi yeKesare, iinwele eziphezulu kunye neengqungquthela zidibaniswa kwangaphambili, ekudaleni - ziphakama phezulu ngendlela ye "hedgehog" okanye "Iroquois";
"Ibhokisi" kunye ne "poluboks" - iifoto zezinwele zabantwana zabafana, ezenziwe kwezobuchwephesha, zibonisa ngokucacileyo ukusebenza kwazo, kunye nobuso obubonakalayo, kubonga ukuba imakhwenkwe enezinwele ezibonakalayo ibonakala yindoda.
Nangona iinqununu zeentloko zezingane zineepatheni zilahlekelwa zikhundla zabo, oko akuthethi ukuba imivimbo ecocekileyo okanye iipatheni zokuqala kwintloko yonyana wakho ayifani. Ingongoma kuphela efuna ukuba ithathelwe ingqalelo kukuba umzobo awufanele ukhathalele ingqwalasela ngokugqithiseleyo, ingakumbi ukuba inkwenkwana yakho isele iyingane yesikolo.
Izinwele zamantombazana zamantombazana, iAntumn-yeHlabathi 2016-2017
Amakhanda ezinwele eziphathekayo ezinamantombazana asetsheni 2016: ifoto
Ukuba kumakhwenkwe owodwa oyintandokazi inqamlezo elifutshane, ke kunye namantombazana konke okuphambene noko. Lapha, umkhwa ophela kwaye ungapheliyo kwaye uya kuba neenwele ezinde, ngoko ke uninzi umama ubeka ngokukhawuleza injongo yokukhulisa iipringlets zabo zokunyathelisa. Kodwa kufuneka kukhunjulwe ukuba ngentombazana encinci, iinwele ezinde zininzi zithintelo kunomdumo, kuba ziphazamisa ukudlala, zidinga ukunakekelwa kunye nesimbolo ngenkqubo engathandekiyo yokudibanisa.
Ukuqwalasela ukuba endleleni yokubaluleka ukukhutshwa kwexesha elide kuya kuba nezigaba zeenwele ezifutshane kunye eziphakathi, iintsuku zokubhenqa iintsapho ezingamafowuni 2016 kumantombazana ahlukeneyo:
"UBob" kunye no "Bob-kara" - inketho ekhethekileyo yokwenza i-hairstyle encinane kumfana omncinci wezemidlalo okanye nje intombazana-engacatshangwanga. Unokukhetha ukhetho ngaphandle kweengxowa okanye kunye nalo (okokugqibela kukukhetha, kuba akuyi kuphazamisa ukuhlaziywa nokuchaphazela amehlo). "UBob" kunye "noBob-kara" banamalungelo abancinci abancinci abancinci beentloko ezinqamlekileyo, ezincinci, kunye ezincinci;
"Ngaphantsi kwenkwenkwana" - ezinjalo iinwele zeenwele ezincinci zilungele iintsana ezincinci kunye nemivimbo emfutshane ye-9-12 iminyaka. Kwimeko yokuqala, baya kunceda ukunika umlo omhle wokukhula kweebhere, kwaye okwesibini kufuneka benze umfanekiso wabo;
"I-Quads" - inwele yeklasi yokwenza nayiphi na ubude beenwele, ngokukodwa ngokukhula. Ukwenza i-hairstyle ibe mnandi, kule ngxaki unako "ukudlala" nge-bang, okanye kunoko-ubude bayo, imilo kunye nokufakela;
"I-Cascade" enye enye into enhle yeenwele ezinde kunye nobude obude obuphakathi kwamantombazana asekhulile. Ikuvumela ukuba wenze i-hairstyle ibe mnandi kwaye iyamema, kodwa idinga ukunakekelwa okuthile.
Njengoko ubona, ukhetho lwezinwele zezinwele zezingane ezifake imfono lukhulu ngokwaneleyo ukuba aluvumelekanga kuphela ukukhetha umfanekiso ofunwayo kumntwana wakho, kodwa ukuguqula. Kodwa ungakulibala ukuba kwindawo yokuqala ngokukhetha iindlela zokukhetha iinwele zendodana okanye intombi yakho kufuneka ube nekhono lokulungelelanisa, kwaye emva kokukhawuleza emva nangaphandle.
Ukuthambekela okutyebileyo kwexesha leAntumn-yeHlabathi 2015/16 kunye neBIZZARRO
Yenza umdlalo kwaye ukhethe: nayiphi na i-whim - kwi-Iqoqo elilandelayo le-festive
Ukufezeka: uCaterina Leman FW 2016-2017 ukuqokelela iholide
Ukuthenga nge-Intanethi kwintengiso ye-intanethi - intandokazi eyintandokazi yabasetyhini ba namhlanje
Siyakwamkela kwindalo yamagama: Iqoqo leFlorland leFendi S / S 2016
Iindlela ezi-5 zokubopha i-Stole ne-Shawl ebusika
Ukuzihlaziya kwezingane ezisesikolweni
Izindlela zamasiko zonyango lokunyanzelisa
I-Hendel - umgangatho waseJamani wezilwanyana zemvelo
Ikhukhi zeMnyama neMhlophe
Kuthekani ukuba unokuvuvukala kobuso bakho?
Isobho lomgquba kunye ne-cumin
Inkukhu yebhokwe ebhakabhaka
Unokufumana njani umntwana?
Amakhowe atyusiweyo kunye nochumisi omuncu kunye nemifuno
Impilo engalunganga ngexesha lokukhulelwa
Ingulube yengulube kunye namazambane, ithanga kunye neqathi
Imifanekiso engcono kakhulu kunye neCawa yokuxolelwa, ngo-2018: ngokuvuyisana, imibhalo nemibongo
Ubuvila, ubuthathaka, ukulala: indlela yokukrazula
Isaladi ye-celery ngeapula
Isaladi kunye ne-salmon eshushu
Iingxowa ze-ushokoledi kwi-glaze